Yusuf Garaad: 1989 iyo 1990
Waa laba sano oo muhiim u ah taariikhda Soomaaliya ee casirga ah. Waa laba sano oo haddii aad fahamto wax badan kaaga tari kara in aad fahamto waxa maanta dalka ka taagan.
Waxaan dhowaan kula wadaagi doonaa Qormooyin Taxane ah oo kooban oo ku saabsan in ka mid ah nolosheydii iyo shaqadeydii samafal ee labadaas sano.
1989 iyo 1990 waxaan ka shaqeeyay magaalooyinka Muqdisho, Berbera, Hargeysa, Burco, Baki iyo Borame. Muqdisho iyo Berbera ayaa labaduba xarun ii ahaa oo Xafiis, hooy iyo gaadiidba aan ku lahaa.
Magaalooyinka kale waxaan ku tegi jiray safar shaqo oo cirka ah colaadda darteed, marka laga reebo Burco oo aan 1990 baabuur ku tagay aniga oo ka soo baxay Berbera, ugana soo laabtay.
Waxa aan ka warramayaa dhibic ayay ka dhigan yihiin marka la barbar dhigo dhacdooyinkii labadaas sano. Sida iyo sababta ay wax u dhacayeen iyo qofka ama kooxda geysatayna lama wada ogaan karin. Laakiin dhibicda aan soo bandhigayaa waa dhibic sax ah oo aan anigu u soo joogay.
Waxaan kula wadaagi doonaa inta ay isheydu qabatay iyo waxa uu dareenkeygu ahaa. Waxa keliya oo wehliya macluumaad aan il lagu kalsoonaan karo ka helay raadraacna leh.
Ujeeddadeydu waxay tahay in aan taariikhda kooban ee aan goobjoogga ka ahaa aan la wadaago inta aan goob joogga ahayn - ha noqdeen in aan markaas dhalan ama ha noqdeen qaar markaa joogay laakiin aan daneyneyn ama waayay xog dhab ah.
Waxaa kale oo aan ugu talo galay dad dhacdooyinka qaar ka aamminsan war aan sax ahayn amaba ka faafiya.
Ugu dambeyn waxaan ugu talo galay in dhallinyarada aqoonhayannada ah ee taariikhda baaraya aan tilmaamo una bidhaamiyo raad ay daba geli karaan si taariikh buuxda oo sax ah ay u soo banhigi karoodaan.
Taxanahaas waxaad ka akhrisan kartaa isla bartaydaan oo cinwaankeedu yahay:
Fadlan ila wadaag haddii aad hayso macluumaad wax ku biirin kara dhacdooyinka aan ku soo qaadi doono Taxnaha.
Akhris, faham iyo faallo wanaagsan ayaan kuu rajeynayaa.
Posted by Yusuf Garaad at 12:56:00